Ity herinandro ity tao amin’ny tontolon’ny blaogy Syriana · Global Voices teny Malagasy
Ity herinandro ity tao amin'ny tontolon'ny blaogy Syriana
Voadika ny 27 Jona 2019 5:02 GMT
Mba hanombohana, toy ny mahazatra, nanoratra lahatsoratra tena mahaliana be mikasika ny anjara asa sahanin'ireo Amerikana metisy Arabo/Syriana ankehitriny eo amin'ny demokrasia any amin'ny firenena niavian'izy ireo i Ammar Adulhamid, ary koa mikasika ny anjara asa mety sahanin'izy ireo amin'ny fanomezana ohatra avy amin'ilay fivorian'ny Kaomity Arabo-Amerikàna Mpiady Amin'ny Fanavakahanana …
Ny zava-misy dia somary sambatra ireo Arabo Amerikana, raha ampitahaina. Satria na teo aza ireo fitsaratsaram-poana manodidina azy ireny ao anatin'ny fisainam-bahoaka sy any amin'ny haino aman-jery, ary na teo koa aza ireo hetsika fampihorohoroana natao tamin'ny anaran'izy ireny, na amin'ny ampahany fotsiny aza, tsy mbola lasibatry ny fanavakavahana mihatra toy ireo vondrona vitsy an'isa tao amin'ny firenena izy ireny hatreto. Marina fa mety ho afaka ny hilaza tsara isika hoe somary voatery ity toe-javatra ity, saingy tsy manome rariny na manamarina ny miara-matory amin'ny fitondrana Arabo izany.
Manana lahatsoratra mahaliana mikasika ny “Neo-Internasionalisma taorian'ny 9/11″ i Nassim Yaziji avy ao amin'ny Middle East Policy, ary koa mikasika ny fomba hikasihan'izany ny dingana demokratika ao Afovoany Atsinanana…
Mieritreritra aho fa mba hanavaozana ny ao Afovoany Atsinanana, tokony hanova ny rafitra ara-politika sy ny jeopolitikan'ny Afovoany Atsinanana aloha isika. Tsy maintsy tratrarina izany tanjona izany. Ezaka iraisampirenena mifanaraka amin'ireo fenitra iraisam-pirenena napetraky ny lamina iraisam-pirenena, mandray ny zava-misy hoe ny lamin,a iraisampirenena taorian'ny ady mangatsiaka dia tsy natao ary tsy nomanina ho an'izany. Misokatra ho an'ity dingana ity ny lalana taorian'ny fiovàna nilaina tany Iraka.
Ao anatina tsindrimpeo malefaka kokoa, maneho hevitra amin'ny lahatsoratra iray nosoratan'i Reuters i George Ajjan, izay manondro ny Filoha Syriana Bashar Assad, antsoina amin'ny fanampinanarany hoe ”Bashar” fa tsy “Assad”, mahalala fomba kokoa, matetika ampiasaina mba hanondroana ireo mpitondra fanjakana.
Amin'ny ankapobeny, mampiasa ny anaram-pianakaviana ny haino aman-jery rehefa miantso ireo mpitondra Fanjakana. Ny miavaka azo marihina indrindra vao haingana dia ny filoha Irakiana teo aloha, Saddam Hussein al-Majd al-Tikriti, izay matetika nantsoin'ny haino aman-jery, na Arabo na Anglisy, hoe “Saddam”. Na dia tsy isalasalana aza fa mety ho vokatry ny fanidraindrana olona izay nataony tamin'ny tenany ihany izany, toy ny ezaky ny olona iray ivelany ny tsy hampifanaraka ilay lehilahy amin'ny lalàna. Tadidiko nisy ezaka kisendrasendra hanaovana ho matihanina an'ity raharahana ity, tamin'ny namakiako ny NY Times izay manonona an'i “Atoa. Hussein”, izay toa tsy nifanaraka mihitsy.
Ivelan'ny politika, ary eny amin'ny lalana Syriana, izay amoahan'i Ammar avy ao amin'ny My Many My's lahatsoratra mikasika ilay hantsana lehibe manasaraka ny olona mihalasa mpivavaka sy ny ampahany iray hafa ao anatin'ny liberalisma “tafahoatra”, izay itarafana ny fironana ankehitriny amin'ny fiovana lavitry ny antonony ao amin'ny fiarahamonina Syriana…
Nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay, nahazo mpanaraka maro ireo mpifanohitra ireo. Miroborobo amin'ny fomba mampahatahotra ny olona tahaka izany ato amin'ny fiarahamonintsika ary mandrahona ny hanimba ny kolontsaina mandàla ny antonony izay nankafizin'ny Damascus-ntsika foana. Tsy mitondra tena toy ny “mirehareha amin'ny lasa feno fandresentsika” fotsiny aho, fa raha manontany ny ray aman-dreninay ianao, ratsy noho ny taloha izany, na dia tamin'ny nisaronan'ny vehivavy hatrany ambony ka hatrany ambany aza, nizotra tsikelikely nankany amin'ny fahalalahana mpitahiry izy ireo no sady nampiasa ihany ny sainy.
Nanoratra tamin'ny fomba mamiratra mikasika ny resaka mahaolona i Omar avy ao amin'ny Earth to Omar, nametraka fanontaniana lehibe, nanao ny fanandramany manokana, amin'ny maha Palestiniana teraka ary lehibe tao Syria azy, izay nifindra monina tany Kanadà sy manana zom-pirenena Kanadiàna ankehitriny…
Teo amin'ny faha-12 taonako, tsy mbola nanana ny zom-pirenena ofisialy aho. Tsy nanana pasipaoro, olon'ny firenena tsy nisy ara-politika (ary mbola tsy misy foana) aho, ary teo no nidiran'i Kanadà an-tsehatra. Nanome ahy ny zom-pireneko sy pasipaoro voalohany i Kanadà. Voalohany teo amin'ny fiainako no naha-olompirenena ahy tao amin'ny firenena iray tamin'ny fomba ofisialy. Hilaza ny olona sasany “fa Kanadiàna ara-taratasy fotsiny ianao” fa te-hanamarina ny mifanohitra amin'izany aho. Taona vitsivitsy sisa dia hitovy tamin'ny faharetam-ponenako tany Syria ny nipetrahako taty Kanadà. Raha ny marina, tany Kanadà no niainako ireo taona manandanja indrindra teo amin'ny fiainako. Taty no niainako ny naha-zatovo ahy, ary ankehitriny, miaina ireo taona voalohany maha-olon-dehibe ahy aho aty. Nanintona ahy ary nitaona ahy toy ny nanintonany sy nitaonany ireo Kanadiàna teraka tany Kanadà ihany koa ny kolontsaina Kanadiàna, raha izay no tianao. Mahatonga ahy ho Kanadiàna ve izany? “Avy amin'ilay” firenena nanome anao ny zom-pirenenao voalohany ve ianao?